Esi mee ka nwata bụrụ nwa mposi
Na angina, bronchitis, otitis, oyi baa, etuto, ịgbatị na dislocation, enwere ike inyere nwatakịrị aka na compresses. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọgwụ ndị a na-enyere aka, ma anyị ga-agwa gị otu esi eme ka nwata bụrụ mkpokọta, mana ekwesịrị iburu n'uche na n'ọnọdụ ụfọdụ, mkpịsị nwere ike ịkpata nsogbu. Onye kwesiri imata na ndi mmadu na-eme ka a ghara ime ka ha di elu, ma ha agaghi etinye ha n'onu ubu, oghere na obi. N'okwu mbụ, nchịkọta ahụ nwere ike ime ka ọnọdụ onye ọrịa ahụ dịkwuo njọ, na n'ọnọdụ ọzọ, ọbụna na ahụ ike, enwere ike inwe ngbanwe nke na-eduga ọrịa ahụ.
Echela onwe gị, nke a na-emetụta ọnụ. Ya mere, tupu ị na-etinye nwatakịrị na mpikota onu, jide n'aka na ị gakwuru dọkịta. Nke a na-eme ka ị nwee mgbake na ngwa ngwa.
O siri ike ime mpikota onu. Iji mee nke a, nke mbụ n'ime ụlọ ahụike ahụike ị chọrọ iji bandeeji na ihe ndị dị mkpa ma ọ bụ ọgwụ ndị a ga-eji na mpikota onu ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ahụike nke nwa gị. Ị ga-achọ akwụkwọ e ji akpụkpọ anụ (ị nwere ike ịzụta mmanụ akwa). Gbanye akwa ahụ dị na 6-8, tinye ya na ọgwụgwọ (dịka ntụziaka a na-atụ aro) ma tinye ya na ntụpọ ọnya, gbakwunye akwụkwọ a na-eme ka ọ dị na bandeeji, nke ga-ekpuchi bandeeji nke na-etinye aka na ọnyá ahụ site na centimeters. Iji dozie mpempe akwụkwọ na ahụ, tinye flannel ma ọ bụ ajị anụ na ya ma dozie ya niile na nkedo aka ka i wee tinye mkpịsị aka gị n'okpuru bandeeji ahụ.
Ngwurugwu maka bronchitis na oyi baa
Na bronchitis na oyi baa, nchịkwa nke ndị na-eme ka ndị mmadụ na-agbake ngwa ngwa, ka ha na-emepụta mmetụta dị ọkụ, nke a bụkwa ihe mbụ ahụ dị mkpa maka ọrịa ndị a. Agụba Badger bụ ọgwụgwọ dị irè na nkà mmụta ndị mmadụ, mpịakọta sitere na ya na-etinye aka na azụ nke nwa ahụ. Ma echefula banyere eziokwu ahụ bụ na a na-eme ka ndị na-emegharị ọnụ na-eme ka ha ghara ịdị elu.
Ị nwere ike ime ka chi chiiz mechie. Iji mee nke a, were 100 g nke cheese cheese, wepụ ọbara si na ya ma tinye mpikota onu na azụ nwata ahụ. A ga-ewepu mpikota onu mgbe curd uka dries.
Compresses maka otitis
Iguzogide otitis (mbufụt na ntị), ị nwere ike itinye mpikota onu dika mmanu. Debe mpempe akwụkwọ a kwadebere n'ụlọnga ahụ ma chekwaa ya.
Mpempe akwụkwọ yabasị dị irè. Bee na yabasị, bee ya ma kechie ya gauze. Mpempe akwụkwọ dị otú ahụ na ntị onye ntị na-etinye ugboro ole na ole n'ụbọchị.
Mkpakọ n'oge dislocation
Ọ bụrụ na ị na-agbagha, a na-atụ aro ka ị tinye ice cubes (maka ihe mgbu mgbu) ozugbo ọnyá ga-belata mmetụta uche na-egbu mgbu n'ógbè ahụ metụtara. Ma emesia wepu usoro mmeghari ahu, i nwere ike ime ka nwatakiri a di nfe onu, nke ga-eme ka mweghachi nke nkwonkwo ya. Iji mee nke a, mee mpịakọta nke tincture nke plantain ma ọ bụ site na ihe ọṅụṅụ ya. A ghaghị iji mmiri na-egbu mmanya na-egbu egbu nke plantain na mmiri dị 1: 1. Site na ngwọta nwetara, mee mpikota onu.
Ngwurugwu maka etuto
N'ịlụ ọgụ megide ihe ndị na-ezughị okè, compress aloe bụ onye inyeaka dị irè. Saa akwukwo aloe, kpochapu ya, tinye ya na mpaghara ozo nke mere na aloe ihe ozo choro ocha, dozie ya na bandeeji.
Mpempe akwụkwọ dị ụtọ: gbakwunye obere mmanụ nke mmanụ aṅụ (ọ bụla) na powdered sugar, mee obere achicha si na ya, tinye ya na obụpde ma dozie ya.
Abụọ ọgwụ ndị a kọwara n'elu adịghị dị ala karịa ndị a na - eji lụso pustules nke mmanu Vishnevsky.
Kọmpụ na sprain
Ịkwalite njikọ ọkpụkpụ bụ otu n'ime ọrịa ndị na-adịghị mma ma na-egbu mgbu. N'agbanyeghị nke a, ọ na-ezute ụmụ, na, ọzọ, mgbe mgbe. N'okwu a, n'ezie, ọ bụrụ na enyemaka nke onye ọkachamara ahụike enweghị ike ime, n'ihi na ọ bụ naanị dọkịta nwere ike ịchọta nchoputa ziri ezi. Ọ bụrụ na dọkịta achọtaghị ihe ọ bụla dị njọ, ị nwere ike itinye mkpịsị mpempe akwụkwọ sitere na osisi ọgwụ. Ị nwere ike ịme ude si arnica ma ọ bụ vivacity. Mee ka mgbakwunye ọkụ na-ekpo ọkụ, na-awụnye otu gauze na mmanu mmanu ma tinye aka na ebe a na-agbatị.
Ejiri angina (tonsillitis)
N'ihi na angina abụghị naanị oke ahụ ọkụ na ọkụ na-egbuke egbuke, kama ọ na-amụkwa lymph ọnụ. Tupu ị na-etinye nchịkọta ahụ, ịkwesịrị iji normalize ahụ ọkụ nke ahụ nwatakịrị ahụ wee nwee ike ịmepụta ihe ọṅụṅụ mmanya. Iji mee nke a, jikọta otu na mmanya 76% na mmiri ma mee mpikota onu site na ngwọta na-esi na ya pụta n'olu.
Mpempe akwụkwọ na ihe na-esonụ ga - enyere aka na tonsillitis buru ibu. Nri nke flax, ghaa na grater ọma wee wụsa ha na mmiri ara ọkụ. Mgbe ebe a na-ede akwụkwọ na-acha aza aza, tinye ha na ntanye ahụ ma chebe mgbatị na-apụta na mpaghara nke lymph cervical lymph. Ịrụ ọrụ a mgbe niile ga-enyere ahụ aka ịlụso ọrịa ahụ ọgụ ma mee ka ọ gbakee.
Kedu ka kacha mma isi na-ehi ụra nwatakịrị nwere ohiri ma ọ bụ na-enweghị
Ahụhụ, ihe mberede n'etiti ụmụ
Ọrụ nke ihe oriri na-edozi ahụ na mmepe nke caries na ụmụaka
Mgbochi nke anomalies dentoalveolar na ụmụaka
Ngwọta nke mbufụt nke usoro genitourinary nke nwatakịrị ruo otu afọ
Otu esi esi zie nwatakiri ka ọ na-agba ngwa ngwa
Hemangioma na ụmụaka na ọgwụgwọ ya
Akụkọ banyere ịhụnanya na onye nkụzi
Ugboro ala maka ejima maka afọ ọzọ
Shish kebab si salmon
Ịgba afọ n'oge ime
Nlekọta ụlọ nke ihe ịchọ mma site na okooko osisi: chamomile, rose, calendula
Ezumike nke uto
Nne eze na-elekọta
Ndụmọdụ ejiji ejiji na onyinye si n'aka Calvin Klein Jeans
Weghachite akpa ara na-enweghị ịwa ahụ
Kedu ihe eji akwa akwa pụtara?
Ekele na Ụbọchị niile ndị hụrụ n'anya na-ekwu okwu: "Mmasị" Ọjụjụ maka February 14
Olga Buzova nọ n'ụlọ ọgwụ, foto